Ndị na-emepụta ihe ọkụ ọkụ - Shanghai P&Q lamp Co., Ltd.
P&Q Standard Ngwaahịa
Shanghai P&Q Lighting Co., Ltd. guzosie ike na 2005 bụ ọkachamara ọkụ emeputa ke anwụ-mgbatị, plastic injection, na mpempe akwụkwọ metal. Amalite site a nta onye n'ime a ibu onye na ya na-anwụ-mgbatị na nzukọ factory na Haining nzọụkwụ site nzọụkwụ. Die mgbatị igwe si 200 tọn ~ 800tons. Anyị na-anọgide na-etinye ego na akụrụngwa ọhụrụ iji nwee ihe ịga nke ọma na-eche ihe ịma aka nke mmelite na-aga n'ihu n'ihu, ma na-enyekwa ngwọta kachasị mma maka mkpa ọ bụla na ndị ahịa anyị. P&Q bụ enweghị plastic injection na mpempe akwụkwọ metal factory, ma nwekwara ike inye plastic injection na mpempe akwụkwọ metal akụkụ dị ka ndị ahịa chọrọ.
IEnyịnya nri akụkụ
P & Q nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe na Haining, Zhejiang, China. Ọ dịghị ihe na-erughị 6000 m2. Mmepụta ahụ na-arụ ọrụ na njikwa njikwa ISO9001. Ọfịs na ụlọ ọrụ mmepụta ihe jikwaa na usoro ERP kemgbe 2019.
Na P & Q, anyị ghọtara na ịdị mma dị elu, nke enyere ngwa ọrụ nke ọma na-ebute ngwaahịa dị elu, iji ihe ọfụma rụọ ọrụ yana ndụ ogologo oge. Na mgbakwunye, mmemme mmezi ihe P & Q na-eme ka arụmọrụ kacha mma, ntụkwasị obi na ogologo ndụ. Mgbe ọ ...
Ihe ọmụmụ P&Q
P & Q solution ● Tinye 4pcs 3mm na-eme ka ọgịrịga dị n'elu (Mba # 1,2), 6pcs 2.5x3mm na-eme ka ọgịrịga na 2pcs na-eme ka mgbanaka dị na ala ...
denye aha na akwukwo ozi